Madaxweyne Xasan oo ku adeystay taageerada Haadi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo ku adeystay taageerada Haadi
A warsame 6 April 2015 6 April 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay mowqifka dowladda Soomaaliya ku taageertay dowladda Yemen, iyadoo cabsi ka dhalatay in taageeradaasi ay khatar geliso shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Yemen.
Madaxweyne Xasan oo la hadlay VOA ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya labo sababood u taageertay dowladda Yemen, ugana soo horjeesatay Kooxda Xuuthiyiinta ah ee dalkaas ka dagaalamaya.
“Dowladda Soomaaliya labo sababood ayay u taageertay dowladda Yemen, Marka hore DFS ma aqbaleyso in qori lagu rido xukuumad sharci ah, marka labaadna waxaan dowladda Yemen ka mideysanahay la dagaallanka dhamaan kooxaha xagjirka ah, sida Alqaacidda, ISIS iyo koox kasta oo sidooda u dhaqmeysa” ayuu yiri madaxweyne Xasan.
Madaxweynaha oo la weydiiyey in mowqifkaasi halis ku yahay dadka Soomaalida ah ee Yemen ku nool ayaa yiri “Hadaan aamusno iyo haddaan hadalno mar kastaba dadka khatar ayay ku jiraan maxaa yeelay waxey joogaan dhul dagaal ka jiro, waxeyna la mid yihiin dad kale ee Yemeniyiinta ah”.
Wuxuu madaxweynuhu tilmaamay in dhawaan dalka Yemen ay dowladda Soomaaliya oo kaashaneysa UN-ka ay kasoo daadgureyn doonto dadka halkaas ku sugan ee ka baxanaya colaadda dalkaas.
Dhanka kale, madaxweyne Xasan ayaa wax laga weydiiyey sababta keentay in dowladda Soomaaliya la safatay dalka Sacuudi Carabiya kadib khilaaf dhex maray Sweden iyo Sacuudiga.
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay arrintaas uga mowqif aheyd Ururuka Jaamacadda Carabta oo Sacuudiga garab istaagay markii wasiirka arrimaha debadda Sweden dhaleecceysay nidaamka Garsoorka ee Sacuud Carabiya.
Wuxuu Xasan Sheekh sheegay in taageerada dowladda Soomaaliya siisay aysan saameyn ku yeelan doonin Soomaalida ku nool dalka Sweden.
Markii dowladda Soomaaliya la safatay Sacuudiga ayaa dad badan arrintaas la yaabeen, iyagoo is barbar dhigay soo dhaweynta Sweden u sameysay Soomaalida iyo dhibaatada Sacuudigu ku hayo xoogsatada Soomaalida ah ee dalkiis ku nool.
Madaxda Woqooyi Bari Kenya oo nacay Qaxootiga